tababarka waayeelka waayeelka waayeelka waayeelka waayeelka ah ee waayeelka ah
Tus wadnaha iyo kala
Waxaad baran in tababar xirfadlaha daryeelka caafimaadka si loo fuliyo farsamooyinka daryeelka caafimaad ee hoos yimaada kormeerka iyo kormeerka kalkaaliyaha. Waxaad caawimaad ka heleysaa dadka qaata daryeelka ayaga iyo hawlaha nolol maalmeedka guud. Waxaad baraneysaa sida loola xidhiidho hab sax ah iyo sida loola dhaqmo dadka qaata daryeelka. Adigoo daryeel-bixiye ah waxaa laguu tababaray inaad si madax-bannaan u shaqeyso guryaha kalkaalinta, xarumaha daryeelka ama daryeelka guriga. Ka dib markaad heshay shahaadada xirfadle daryeel caafimaad waxaad sidoo kale sii wadan kartaa waxbarashadaada koleejka kalkaalinta.
Tababarkayaga daryeelka caafimaadka waa nooc ka mid ah tababbarka. Barashada labadaba waxay ka dhigan tahay inaad heshid khibrad aad uwanaagsan inta lagu jiro waxbarashadaada iskuulada iyo shaqada. Waxaa sidoo kale lagaa siiyaa maalmaha aad bilowdo shaqo.
Laga soo bilaabo 1 September 2019, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ayaa laga yaabaa, inay ku xiran tahay tababar dheeraad ah saacadaha 150, waxay qabtaan hawlo dheeraad ah bukaanka, sida maareynta indhaha indhaha ama cabbiraadda sonkorta ama cadaadiska dhiigga. Laga bilaabo maanta waxaan sidoo kale bixinaa tababarka dheeraadka ah.
Een tababar xirfadlaha daryeelka caafimaadka qaadataa hal sano.
Waa barnaamij toosan taas oo macnaheedu yahay in aad ku biiri kartaa wakhti kasta oo sanadka, laakiin waxa keliya ee aad u qalin kartaa on June 30.
Waxaad u baahan tahay tababarka this daryeelka khibradda waxbarasho horudhac ah qurxinta raacay.
Si aad u raacdo barnaamijka Zorgkundige, waa inaad horeba u heshay karti ku filan ee Waaxda Daryeelka. Tan waxaa lagu sameyn karaa shahaado qurxinta si aad u hesho waxbarasho farsamo oo waqti dhiman ah ama 3 Daryeelka shahaadada ee waxbarasho waqti buuxa ah.
aqoon ku filan oo Dutch waa shuruud, tan iyo markii xiriirka ay la qaadato daryeelka iyo saaxiibadiisa waa mid aad u muhiim ah.
shaqeeya sida daryeelka khibradda waa xirfad bulsho. Waxaad ka shaqayn doonaa in a kooxdaada daryeelka caafimaadka taas oo macnaheedu yahay inaad u baahan tahay inaad si wada jir ah u shaqeyso. Waxaad la xiriiri doontaa daryeelayaasha, dhakhaatiirta, qoyska iyo tabaruceyaasha. Maadaama aad tahay xirfadle daryeel caafimaad waxaad leedahay saacado shaqo oo rogrogmi kara oo aad inta badan ka shaqeyso isbeddel.
Halkan riix si aad u hesho macluumaad dheeraad ah (website VDAB)
Waxaa baahida weyn u Xirfadlayaasha caafimaadka suuqa shaqada. Ardayda inta ay tababarka nala shaqo iskuulka, shaqada waxa ay inta badan hayn karo ka dib markii ay ka qalin jabisay.
Markaas waxaad awoodi doontaa inaad ka shaqeyso, tusaale ahaan, xarumaha daryeelka degaanka, daryeelka guriga, isbitaal ama naafada.
Intee in le'eg oo aad shaqaysato haddii khabiir daryeelka si xoog leh ku xiran tahay goobta shaqada iyo in ay ka shaqeeyaan gelinba.
Haddii aad jeceshahay inaad la shaqeyso carruurta, waxaad dhigan kartaa dugsigeena dugsiga Fududeeye ee Carruurta raac.
Haddii aad heleyso dibloomadaada waxbarashada dugsiga sare, weli waxaad qaadan kartaa koorsooyin kala duwan oo ku yaalla dugsiyada kale. Tusaale ahaan, waxaad sii wadi kartaa barashada kalkaalisada HBO, daryeelka daaweynta, caawimo guri ...
Si faahfaahsan u daaweynta caafimaadka
Waxaad baran tababarka daryeelka khibradda sida si ay u caawiyaan kalkaaliye caafimaad.
Inaad xajisaan diiwaanada daryeelka ee.
Haddii aad kalkaalisada ka caawiso, waxaad samayn kartaa hawlo badan oo kalkaalisooyin ah sida xirfadlaha daryeelka caafimaadka.
ALS Qurxinta / Protection Care aad dadka xaaladaha daryeelka kala duwan u shaqeeyaan.
Waxaad u aragtaa muhiim in qofka qaata daryeelka caafimaadku helo daryeel habboon. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad hubiso daryeelka caafimaadka qofka qaata.
Waxaad ku noolaan kartaa waayo-aragnimada bixiyaha xanaanada waayeelka, adigana waxaad la xiriiri kartaa qoyskiisa.
Waxaad kicin qofka u baahan daryeel gudahood jawi ammaan iyo dareento guriga. Waxaad ka shaqeeyaan koox.
waayo-aragnimo ee tababarka daryeelka xirfad leh in aad ka heli kartaa:
Guryaha iyo xarumaha daryeelka.
Isbitaalada, xarumaha baxnaaninta.
Nidaamyada loogu talogalay noolaanshaha guryaha, hay'adaha loogu talagalay dadka curyaamiinta ah.
Waa maxay dabeecada xirfadlaha daryeelka caafimaadka?
Xirfadlayaasha caafimaadka ka shaqeeya xaaladaha daryeelka adag; shaqada marka hore iyada oo ay kormeerayaan iyo ka dib madax banaan.
Baro baahiyaha iyo baahiyaha kooxda la beegsanayo. Daryeelka nadaafadda ayaa ah dabeecadda caadiga ah ee daryeelka aasaasiga ah gudaha guriga iyo daryeelka waayeelka.
Xirfadlaha daryeelka caafimaad kasta wuxuu u dhaqmaa sidii xubin ka mid ah kooxda kalkaalisada. Waxaad ka shaqaynaysaa qorshe daryeel.
Waxaad xaqiijineysaa xaalad nolol haboon iyo xaalad nololeed oo aad si taxadar leh u siiso fayoobida waayeelka iyo / ama qoyska.
Ellen Smedts - Xiriiriyaha Shaqada